10 Barnaamijyo Kalkaaliso Caafimaad oo Florida ah
January 27, 2022 Chima Godswill
Aad ayey suurtogal u tahay inaad u gudubto kalkaalisada shaqadaada hadda ama shahaadadaada koowaad ee kalkaalinta caafimaadka. Tani waxay ku suurtageli kartaa oo keliya in la diiwaan geliyo barnaamijyada kalkaalinta ee la dedejiyey. Sidaa darteed, baro barnaamijyada kalkaalinta ee Florida ee la dadajiyay.
Guud ahaan, kalkaaliyayaasha rajada ahi waxay waxbarashadooda ku bilaabaan isdiiwaan gelinta dibloomada (LPN) ama shahaadada koowaad ee jaamacadda ee kalkaalisada (BSN) kulliyad ama jaamacad kasta. Si kastaba ha ahaatee, ardayda ka qalinjabisay shahaadooyinka aan kalkaalinta ahayn ee raba inay galaan goobta kalkaalinta waxay sidaas samayn karaan iyagoo qaadanaya barnaamijyo kalkaalin caafimaad oo degdeg ah.
Marka si guul leh loo dhammeeyo barnaamijka la dedejiyey, waxaad kasban doontaa BSN ama MSN iyadoo ku xiran barnaamijka aad dooratay. Shahaadada BSN waxay ku siinaysaa inaad qaadato imtixaanka NCLEX-RN oo aad noqoto kalkaaliye shati haysta.
Barnaamijyada kalkaalinta la dadajiyay waxay sidoo kale u adeegaan fursad kalkaaliyeyaasha shatiga leh si ay u helaan waxbarasho iyo xirfado badan taasoo u horseedda horumar shaqo oo goobo daryeel caafimaad oo kala duwan.
Waa maxay sababta isdiiwaan gelinta barnaamijyada kalkaalinta ee la dedejiyey ay ugu kordheyso caan ka ah Florida?
Sida laga soo xigtay Xarunta Kalkaalisada ee Florida, waxaa jirta baahi aad u sareysa oo loo qabo kalkaaliyeyaasha Florida sanad walba taasina waxay keentay in kalkaaliyeyaasha gobolka ay gabaabsi noqdaan. Tan waxaa dheer, Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ee Mareykanka ayaa Florida ku qiimeeyay shaqada 4-aad ee ugu sareysa kalkaaliyeyaasha Mareykanka.
Sababahan dartood, arday badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ahba waxay iska diiwaan galiyaan barnaamijyada kalkaalinta degdega ah ee Florida si ay u qaataan shaqooyinka kalkaalinta ee gobolka.
Markaa, haddii aad ku haysato shahaadada koowaad ee jaamacadda ee goob kale oo waxbarasho laakiin aad rabto inaad noqoto kalkaaliye shati haysta, maqaalkani wuxuu ku siin doonaa barnaamijyo kalkaalin caafimaad oo degdeg ah Florida kaasoo ka dhigi kara rajadaada mid rumowday.
Barnaamijyada Kalkaaliyayaasha La Dardargeliyay ee Florida
1. Jaamacadda Barry, Miami Shores
2. ECPI University-Orlando, Lake Mary
3. Florida Atlantic University, Boca Raton
4. Jaamacadda Caalamiga ah ee Florida, Miami
5. Jaamacadda Waqooyiga Florida, Jacksonville
6. Jaamacadda Jacksonville, Jacksonville
7. Jaamacadda Keizer, Ft. Lauderdale, Fort Myers, Orlando, Sarasota, West Palm Beach
8. Jaamacadda Central Florida, Orlando
9. Jaamacadda South Florida, Tampa
10. Jaamacadda Miami, Coral Gables
Qalinjabiyeyaasha haysta shahaadada koowaad ee jaamacadda ee goob aan kalkaalin caafimaad ahayn laakiin raba inay noqdaan kalkaaliyeyaal shati leh waxay sidaas samayn karaan iyagoo qaadanaya barnaamijyo kalkaalin caafimaad oo degdeg ah Florida.
Barnaamijyada kalkaalinta ee degdega ah ee Florida waxay ku siin doonaan buundooyinka koorsooyinka aad qaadan doonto waxayna kaa dhigi doonaan inaad ku qaadato shahaadada kalkaalinta waqti gaaban iyo qiimo jaban.
Waxaad isku qori kartaa barnaamijka BSN-ka ee la dadajiyay si aad u hesho shahaadada koowaad ee jaamacadda ama aad isku diiwaan geliso barnaamijka Master of Science in Kalkaaliyaha (MSN) si aad u hesho shahaadada mastarka.
Barnaamijyada kalkaalinta ee la dedejiyey ee Florida waa sida soo socota:
Barry University, Xeebta Miami
ECPI University-Orlando, Lake Mary
Jaamacadda Atlantic Florida, Boca Raton
Jaamacadda Waqooyiga Florida, Jacksonville
Jaamacadda Jacksonville, Jacksonville
Jaamacadda Keizer, Ft. Lauderdale, Fort Myers, Orlando, Sarasota, West Palm Beach
Jaamacadda Central Florida, Orlando
Jaamacadda South Florida, Tampa
Kulliyadda Kalkaaliyaha iyo Sayniska Caafimaadka ee Jaamacadda Barry waxay bixisaa barnaamij kalkaalin caafimaad oo la dardargeliyay. Waxaa la aasaasay 2008 si ay u bixiso waxbarasho daryeel caafimaad oo heer caalami ah oo ku saabsan dhaqanka Dominican.
Jaamacadda Barry, Bachelor of Science ee Kalkaalisada-Accelerated Option (BSN/AO) waxay siisaa tababar adag kalkaaliyayaasha mustaqbalka. Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay afar semester wuxuuna qaadanayaa shan iyo toban (15) bilood in la dhammaystiro.
Inta uu socdo barnaamijka, waxaad qaadan doontaa koorasyo ​​ay ka mid yihiin daryeelka bukaanka, daryeelka qoyska, hoggaanka kalkaalinta & maamulka, pathophysiology, kalkaalisada caafimaadka bulshada/bulshada, hooyada/ilmaha & kalkaalisada caafimaadka haweenka, hordhaca sayniska kalkaalinta, iyo farmashiyaha.
Kharashka waxbarashada ee BSN/AO waa $7000 xilli dugsiyeedkii iyo $50 credit/semesterkiiba kharashka barnaamijka kalkaalinta.
Shuruudaha gelitaanka Jaamacadda Barry ee Sayniska Sayniska ee Xulashada Dardargelinta Kalkaaliyeyaasha (BSN/AO) waa sida soo socota:
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ee goob kasta oo waxbarasho oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 3.2 iyo in ka yar shan ka-noqosho, Ds, ama Fs oo la isku daray.
• Shahaado C ama ka sareeya xagga farshaxanka liberaaliga, sayniska, iyo koorsooyinka kale
Warqadaha talada (2).
• Caddeynta dhammaystirka dhammaan shuruudaha.
Qalinjabiyeyaasha BSN/AO ee Jaamacadda Barry waxay sii wataan si ay u sugaan shaqooyinka kalkaalinta guud ahaan goobaha daryeelka caafimaadka ee Florida oo leh mushahar sare. Jaamacadda Barry BSN/AO waa mid ka mid ah barnaamijyada kalkaalinta degdegga ah ee Florida.
Jaamacadda ECPI waa jaamacad gaar loo leeyahay oo aan macaash doon ahayn oo ku taal harada Mary. Dugsiga kalkaalinta ee ECPI waxa uu bixiyaa waayo-aragnimo waxbarasho oo soo jiidasho leh taas oo u horseedda abaalmarinta shahaado kalkaalinnimo oo kala duwan oo ay ku jiraan associate, bachelor's, kalkaalisooyin la taaban karo, iyo RN ilaa BSN.
Jaamacadda ECPI Orlando waxay siisaa shahaadada Bachelor of Science ee barnaamijka Kalkaalisada si ay ugu qalin jabiso shahaadada koowaad ee maadooyinka xirfadaha kale si ay u noqdaan kalkaaliyeyaal shati leh. Halkan, ardayda waxaa lagu bixiyaa shaqo koorso iyo tababar caafimaad si ay uga caawiyaan inay bartaan xirfadaha la taaban karo, go'aan qaadashada, iyo xallinta dhibaatooyinka lagama maarmaanka u ah xirfadda kalkaalinta.
Shuruudaha gelitaanka Jaamacadda ECPI ee Bachelor of Sayniska Kalkaalisada ee Sayniska ee Orlando waxaa ka mid ah:
Shahaado jaamacadeed oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 2.5
Isku-darka Sayniska GPA ee 2.75 ama ka sareeya (A&P I iyo II oo leh shaybaar)
Imtixaanka ATI TEAS ee musharrixiinta imtixaanay Sebtembar 2016 ka dib
Hubinta asalka FDLE
Intaa waxaa dheer, codsadayaashu waa inay dhammaystireen lix (6) koorsooyin shuruud ah oo ay ku jiraan:
Anatomy iyo Physiology (8 semester credit hours/ 12 quarter credit hours, Part I and II, with labs)
Tirakoobka (3 semester credit hours/ 4.5 quarter credit hours)
Sayniska Bulshada: Cilmi-nafsiga ama Cilmi-nafsiga (3 semester credit hours/ 4.5 quarter credit hours)
Kobaca Aadanaha iyo Horumarinta ama Cilmi-nafsiga Koriinka (3 semester credit hours/ 4.5 quarter credit hours)
Ingiriis (3 semester credit hours/ 4.5 quarter credit hours)
Waxbarashada Guud ee Dheeraadka ah ee Doorashada (11 semester credit hours / 16.5 quarter credit hours)
Barnaamijku wuxuu qaataa laba iyo toban (12) bilood in la dhammaystiro. Kadib markaad dhammayso barnaamijka, waxaad xaq u yeelan doontaa inaad qaadato imtixaanka NCLEX-RN oo aad noqoto kalkaaliye shati haysta. Kadib, waxaad ka shaqayn kartaa rugaha caafimaadka aasaasiga ah, xarumaha daryeelka la maareeyey, isbitaalada, daryeelka caafimaadka guriga, wakaaladaha caafimaadka dhimirka, iyo militariga.
Kuliyadda Sayniska ee Barnaamijka Kalkaalisada ee Jaamacadda ECPI ee Orlando, kambaska Florida waxaa aqoonsaday Komishanka Waxbarashada Kalkaalisada Kulliyadda (CCNE).
Jaamacadda Atlantic ee Florida (Florida Atlantic or FAU) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo la aasaasay 1961. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taal Boca Raton.
Barnaamijka la dedejiyey ee BSN ee Florida Atlantic waxaa bixiya Christine E. Lynn College of Nursing. Barnaamijkani wuxuu diiradda saarayaa daryeelka degdega ah iyo xaaladaha kalkaalinta ee la xidhiidha caafimaadka dhimirka iyo maskaxda. Muddada barnaamijku waa shan iyo toban (15) bilood waxayna qaadataa 60 saacadood oo credit (40 saacadood todobaadkii) in la dhammaystiro.
Markay si guul leh u dhammeeyaan, qalin-jabiyayaashu waxay sii wataan inay qaataan imtixaanka NCLEX-RN si ay u noqdaan kalkaaliyeyaal diiwaangashan. Waxay ka shaqayn karaan guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha ciidamada, iyo isbitaalada.
Haddii aad rabto inaad iska diiwaangeliso Bachelor of Science ee Kalkaaliyaha ee Florida Atlantic, waa inaad buuxisaa shuruudaha hoose:
Shahaado jaamacadeed oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 3.0
Codsadayaasha waxaa sidoo kale looga baahan yahay inay dhammaystiraan koorsooyinka shuruudaha soo socda oo wata C adag ama ka sareeya:
Anatomy & Physiology I & II oo leh Shaybaar
Microbiology leh shaybaar
College Algebra ama wax u dhigma
Halabuurka Ingiriisiga I & II
Kobaca Aadanaha & Horumarka Cimriga
Dardar gelinta barnaamijka BSN ee FAU waa mid ka mid ah barnaamijyada kalkaalinta degdegga ah ee Florida.
Jaamacadda Caalamiga ah ee Florida (FIU) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Florida oo la aasaasay 1965. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taal University Park, Florida.
Barnaamijka dardargelinta BSN ee Jaamacadda Caalamiga ah ee Florida waxaa bixiya Nicole Wertheim Kulliyadda Kalkaaliyaha & Sayniska Caafimaadka. Halkan, ardayda ka qalinjabisay shahaadada koowaad ee jaamacadda ee qaybaha kale ee waxbarasho waxaa la siiyaa koorsooyin degdeg ah oo loogu talagalay Bachelor of Science in Kalkaalisada. Shaqada koorsada waxaa ka mid ah Kalkaalisada Dhalmada, Kalkaalisada Cilmi-nafsiga Bulshada, iyo Kalkaaliyaha iyo Cilmi-baarista Caddaynta ku salaysan ee Daryeelka Caafimaadka Caalamiga ah.
Ardayda waxa la dhigaa kalfadhiga dayrta B sanad walba. Barnaamijka AO BSN waxa uu qaataa saddex (3) semester si loo dhammeeyo. Dabadeed, qalin-jabiyayaashu waxay qaataan imtixaanka NCLEX-RN oo waxay noqdaan kalkaaliyeyaal shati haysta. Barnaamijka AO/BSN ee FIU wuxuu ka mid yahay barnaamijyada kalkaalinta ee la dedejiyey ee Florida.
Shuruudaha gelitaanka barnaamijka degdegga ah ee BSN ee FUI waxay ku xiran tahay haddii aad codsaneyso arday dhaqameed oo doonaya shahaadada labaad ee jaamacadda ama dhakhtar ajnabi ah oo wax ku bartay oo doonaya shahaadada BSN.
Haddii aad u codsanayso arday dhaqameed oo raadinaya BSN/AO, waa inaad:
haysta shahaadada koowaad ee jaamacadda oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 3.0
ku gudub imtixaanka ATI TEAS (Daabacaadda VI).
buuxi NursingCAS gaar ah Codsiga Raadka Xulashada La Dardargeliyay taariikhda kama dambaysta ah.
koorsooyin dhameystiran oo shuruudo ah oo leh C adag ama ka sareeya Hordhaca Cilmi-nafsiga, Horudhaca Anshaxa, Tirakoobka, Kobaca Aadanaha & Horumarinta, Nafaqada, Anatomy Human w/shaybaar, Cilmi-nafsiga aadanaha w/shaybaar, Hordhac Microbiology w/shaybaar, iyo Sahanka Kiimikada w/shaybaadhka.
Haddii aad u codsanayso dhakhtar ajnabi ah oo wax ku bartay BSN/AO, waa inaad:
Hayso shahaado Dhakhtarka Caafimaadka oo leh ugu yaraan isugaynta GPA ee 2.0 waxaana lagu bixiyaa meel ka baxsan Maraykanka
Hayso ugu yaraan 550 (warqad ku salaysan) ama 80 (imtixaanka internetka ku salaysan) imtixaanka TOEFL, ama ugu yaraan 6.5 IELTS dhibcaha band, ama dhamaystirka ENC 1101 iyo 1102.
aan ka helin shatiga RN barnaamij kalkaalin hore.
Koorsooyin dhammaystiran oo ay ku jiraan HUN 2201 (Mabaadi'da Nafaqeynta), DEP 2000 (Kobaca Aadanaha & Horumarinta), iyo Tirakoobka.
Jaamacadda Waqooyiga Florida (UNF) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Jacksonville, Florida oo la aasaasay 1965. UNF waa qayb ka mid ah Nidaamka Jaamacadda Gobolka ee Florida.
Dugsiga Kalkaaliyeyaasha (SON) ee UNF wuxuu bixiyaa barnaamijka BSN-ka ee la dedejiyey ee shatiga ka hor shakhsiyaadka haysta shahaado goob kale marka laga reebo kalkaalisada.
Inta lagu jiro barnaamijka, ardaydu waxay qaataan shaqo koorso bixiya saldhig cilmiyeed oo xooggan oo leh khibrado caafimaad oo kala duwan iyo fursado ay kula shaqeeyaan bukaanka. Manhajku wuxuu ka kooban yahay koorsooyin xirfadeed iyo koorsooyin caafimaad/shaybaar.
Waxay ku qaadan doontaa shan iyo toban (15) bilood oo wakhti buuxa ah inaad ku dhammaystirto barnaamijka BSN-ka ee la dedejiyey ee shatiga ka hor ee UNF. Markay dhammeeyaan, ardaydu waxay u fariistaan ​​imtixaanka NCLEX-RN si ay u noqdaan kalkaaliyeyaal shati haysta.
Jidka la dedejiyey ee liisan-qaadista waa la ururiyey waxaana lagu dhamayn karaa afar (4) simistar isku xigta oo waxbarasho waqti-buuxa ah, ama ilaa 15 bilood. Markay ka qalinjabiyaan barnaamijka, ardaydu waxay u fariisan doonaan imtixaanka shatiga NCLEX-RN.
Haddii aad codsanayso barnaamijka BSN-ka ee la dedejiyey ee shatiga ka hor, waa inaad buuxisaa shuruudaha gelitaanka ee soo socda:
Hayso shahaadada koowaad ee jaamacadda oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 3.20.
Si guul leh u dhammaystir dhammaan koorsooyinka shuruudaha kalkaalinta oo leh "C" adag ama ka sarreeya.
Buuxi Imtixaanka Xirfadaha Waxbarasho ee Aasaasiga ah (TEAS) nooca V ama ka cusub 5tii sano ee la soo dhaafay oo leh buundada ugu yar ee 315.00.
Barnaamijka kalkaalinta kalkaalinta ee UNF waxaa aqoonsaday Komishanka Kalkaalinta Kalkaaliyaha Waxbarashada (CCNE) iyo Golaha Kalkaalisada ee Florida.
Jaamacadda Jacksonville (JU) waa jaamacad gaar loo leeyahay oo bixisa barnaamijyo kalkaalin caafimaad oo Florida ah.
Machadku wuxuu ardayda siiya laba barnaamij oo Bachelor of Sayniska Kalkaalisada (BSN) oo la dardargeliyay. Labadan barnaamij ee AO/BSN waxay ardayda ku qalabeeyaan xirfadaha iyo aqoonta looga baahan yahay inay la kulmaan caqabadaha daryeelka bukaanka.
Barnaamijyada BSN-ka ee la dadajiyay waxaa ka mid ah JU 16-Bisha Dardargelinta BSN iyo Jaamacadda Jacksonville iyo Caafimaadka Baabtiisaha 12-bilood ee Shahaadada Labaad ee BSN.
Sida ku cad barnaamijka JU 16-bilood ee AO/BSN, ardayda waxa loo soo bandhigaa shaqo koorso hab dabacsan oo ay bixinayaan shaqaalaha kulliyadaha si ay u oggolaadaan inay isku daraan xiisadaha iyo arrimaha gaarka ah. Waxay qaadataa wax ka yar laba (20 sano in la dhammaystiro barnaamijka.
Jaamacadda Jacksonville iyo Baabtiisaha Caafimaadka 12-bilood ee Shahaadada Labaad ee BSN, shaqaalaha macallimiinta ee Baabtiisku Health waxay isticmaalaan qaab istaraatiijiyadeed si ay u baraan ardayda xirfadaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah goobta kalkaalinta. Barnaamijku wuxuu ardayda qalin jebiyay fursad ay ku xaqiijiyaan heshiiska ballan-qaadka shaqada ee Baabtiisku Health ka dib markay helaan liisankooda.
Jaamacadda Jacksonville (JU) waxay bixisaa laba barnaamij oo degdeg ah oo Sayniska Sayniska Kalkaalisada ah (BSN) oo kuu diyaarin doona inaad u samayso isbeddel shaqo sida ugu dhakhsaha badan oo waxtarka leh.
Shuruudaha gelitaanka ee labada 12-bilood iyo 16-bilood ee barnaamijyada BSN-ka ee la dedejiyey waxaa ka mid ah:
Shahaado jaamacadeed oo ka timid machad gobol ahaan la aqoonsan yahay oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 2.50 ee cabirka 4.00.
Dhameystirka koorsooyinka shardiga ah ee leh C adag ama ka sareeya. Koorasyada shardiga ah waxaa ka mid ah:
Anatomy & Physiology I ee shaybaadhka la qaaday 10kii sano ee la soo dhaafay (4 dhibcood)
Anatomy & Physiology II oo leh shaybaar la qaaday 10kii sano ee la soo dhaafay (4 dhibcood)
Kiimikada Guud oo leh shaybaar (4 dhibcood)
Microbiology leh shaybaar (4 dhibcood)
Nafaqada (3 dhibcood)
Kobaca iyo Horumarka Aadanaha (3 dhibcood)
Tirakoobka (3 dhibcood)
Waxaa la aasaasay 1977, Jaamacadda Keizer waa jaamacad gaar loo leeyahay oo xarunteeda ugu weyn ku leh Fort Lauderdale, Florida.
Jaamacadda Keizer barnaamijkeeda dardargelinta BSN waxaa laga bixiyaa xarumaha soo socda ee Florida oo ay ku jiraan Fort Lauderdale, Fort Myers, Lakeland, Melbourne, Miami, Naples, Orlando, Pembroke Pines, Port St. Lucie, Sarasota, Tallahassee, Tampa, West Palm Beach.
Barnaamijka AO/BSN waxa uu barayaa kalkaaliyayaasha rajada ah sida loo isticmaalo caddaynta ku salaysan daryeelka wada shaqayneed si loo maamulo daryeelka bukaanka bukaanada kala duwan ee goobaha daryeelka caafimaadka ee kala duwan.
Shuruudaha gelitaanka barnaamijka degdegga ah ee BSN ee Jaamacadda Keizer waa sida soo socota:
Ogolaanshaha waxa lagu ogolaadaa koorsooyinka waaweyn marka la dhammeeyo waxyaabaha soo socda:
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ama qalinjabinta oo leh isku-darka GPA ee 3.0 ee cabbirka 4.0, ama 3.0 GPA ee 60-kii dhibcood ee ugu dambeeyay ee shahaadada.
Dhameystirka koorsooyinka shardiga ah ee leh darajada "B" ama ka wanaagsan Anatomy & Physiology I, Human Anatomy & Physiology II, General Chemistry I, General Chemistry Lab, iyo Microbiology I.
Buuxi Imtixaanka Xirfadaha Waxbarashada Aasaaska ah (TEAS) oo leh dhibco dhan 67.
Baaritaanka taariikhda la aqbali karo iyo baarista daroogada
Baaritaanka caafimaadka iyo tallaalada loo baahan yahay
Jaamacadda Bartamaha Florida (UCF) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne waana mid ka mid ah dugsiyada bixiya barnaamijyada kalkaalinta ee Florida.
UCF waxay bixisaa shahaadada labaad ee BSN iyada oo sii marinaysa kulliyadda kalkaalinta ee jaamacadda. Shahaadada Labaad BSN waa afar-semester barnaamij waqti-buuxa ah oo adag kaasoo manhajkiisu ku lug leeyahay koorsooyin waxbarasho-adeeg ah oo wareegyo bukaan-socod ah oo kala duwan, bulshooyin caafimaad ahaan aan la daboolin.
Shuruudaha gelitaanka barnaamijka heerka labaad ee BSN waxaa ka mid ah:
Shahaadada koowaad ee jaamacadda oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 2.50.
Buuxi Imtixaanka Xirfadaha Waxbarasho ee Muhiimka ah (TEAS)
Shahaado "C" ama ka sareeya dhammaan koorsooyinka shuruudaha laga rabo oo ay ku jiraan:
CHM 1032 (3) Kiimikada Guud ama sayniska kale ee jirka ama nolosha la ansixiyay
MCB 2004C (4) Microbiology oo leh shaybaar
ZOO 3733C (4) Anatomy aadanaha
PCB 3703C (4) Fiisiyooloojiyada Aadanaha
PSY 2012 (3) Cilmi-nafsiga guud ama SYG 2000 (3) Cilmi-nafsiga guud
STA 2014 (3) ama STA 2023 (3) Mabaadi'da Tirakoobka
DEP 2004 (3) Cilmi-nafsiga Koriinka
HUN 3011 (3) Nafaqada aadanaha
Jaamacadda Bartamaha Florida barnaamijkeeda kalkaalinta waxaa aqoonsi ka helay Guddiga Waxbarashada Kalkaalisada Kulliyadda (CCNE).
Jaamacadda Koonfurta Florida (USF) waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo la aasaasay 1956. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taal Tampa, Florida halka xarumaha kale ay ku yaalliin St. Petersburg iyo Sarasota.
Dardar gelinta Labaad ee BSN ee USF waxaa bixiya Kuliyadda Kalkaaliyaha. Halkan, ardayda aan shahaado la'aanta ah waxaa lagu bixiyaa manhaj ka kooban waxbarashada fasalka iyo tababar caafimaad. Shaqada koorsada waxaa ka mid ah qiimeynta caafimaadka, ka hortagga fayoobaanta inta lagu jiro nolosha, daryeelka kalkaalinta haweenka, carruurta, iyo qoysaska, kalkaalinta caafimaadka adag, iyo kalkaalisada caafimaadka dhimirka.
Waxay qaadataa 16 bilood (afar semester) in la dhammaystiro barnaamijka. Dabadeed, qalin-jabiyayaashu waxay sii wataan inay qaataan imtixaanka NCLEX-RN si ay u noqdaan kalkaaliyeyaal shati haysta.
Shuruudaha gelitaanka ee Jaamicadda South Florida ee Degree Labaad ee Degdegga ah BSN waxaa ka mid ah:
Shahaado jaamacadeed oo aan kalkaaliye ahayn oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 3.0.
Buuxi imtixaanka Aqoonta Madaniga ah ka hor xilliga loogu talagalay gelitaanka.
Dhamaystirka Qiimaynta Wareysiga Tooska ah ee Kalkaaliyaha Bull.
Codsiga NursingCAS ee la xaqiijiyay.
Dhammaystirka siddeedda koorso ee shardiga ah ee leh darajada “C” ama ka sare:
Anatomy & Physiology I oo leh shaybaar
Anatomy & Physiology II oo leh shaybaar
Microbiology oo leh shaybaadh
Kobaca Aadanaha iyo Horumarka
Kooras kasta oo Tirakoob oo wata horgalaha STA
Kooras kasta oo cilmi-nafsiga ama cilmiga bulshada oo wata horgalaha PSY, SOP ama SYG
Kiimiko kasta, Bayoolaji, Fiisigis, ama Biochemistry oo wata horgalaha CHM, BSC, PHY, PCB ama BCH
Jaamacadda Miami (UM, Miami, Umiami, U ee M or U) waa jaamacad cilmi baaris gaar ah iyo mid ka mid ah jaamacadaha bixiya barnaamijyada kalkaalinta ee Florida.
UMiami's Accelerated Program BSN waxaa bixiya Dugsiga Kalkaaliyaha iyo Daraasaadka Caafimaadka (SONHS). Manhajka barnaamijka kalkaalinta ee la dadajiyay waa isku darka tababarka kiliinikada iyo waxbaridda fasalka taasoo u diyaarisa ardayda inay qaataan oo ay ku aflaxaan imtixaanka NCLEX-RN oo ay noqdaan kalkaaliyeyaal shati haysta.
Intaa waxaa dheer, tababarka bukaan-socodku wuxuu u baahan yahay ardaydu inay la shaqeeyaan 170 kala duwan oo la-hawlgalayaal caafimaad ah sida Jaamacadda Miami Hospital halkaas oo ardayda la siiyo tababar caafimaad oo heersare ah oo looga baahan yahay inay buuxiyaan shuruudaha daryeelka bukaanka.
Barnaamijka la dedejiyey ee BSN waxa la bixiyaa laba jeer sannadkii (Janaayo iyo May). Waxay qaadataa laba iyo toban (12) bilood oo keliya in la dhammaystiro barnaamijka.
Si aad isu diiwaan geliso UMiami's Accelerated BSN, waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda:
Shahaadada koowaad ee jaamacadda ee goob aan kalkaalin caafimaad ahayn oo leh ugu yaraan isku-darka GPA ee 3.0.
Inuu haysto darajo “C” ama ka sareeya koorasyada shardiga ah oo ay ku jiraan Chemistry with Lab, Human Anatomy with Lab, Kobaca iyo Kobcinta Aadanaha, Jidhka Aadanaha, Horudhaca Cilmi-nafsiga, Microbiology, Nafaqada, iyo Tirakoobka.
Laba warqadood oo talo ah.
Bayaanka Ujeedada (250-650 erey).
CV / resume.
Barnaamijka la dedejiyey ee BSN waxaa aqoonsaday Komishanka Waxbarashada Kalkaalisada Kulliyadda (CCNE).
5 Barnaamijyada Kalkaaliyayaasha La Dardargeliyay ee Alabama
Top 11 deeqda waxbarasho ee kalkaalinta caafimaadka ee loogu talagalay hooyooyinka kelida ah
10 Dugsiyada Kalkaalinta Caafimaadka ee ugu Fiican Houston Texas
5 Dugsiyada Kalkaaliyeyaasha Bilaashka ah ee leh shuruudaha gelitaankooda
15 Barnaamijyada Kalkaalisada Fiidnimo ee ugu Fiican Houston TX
5 Dugsiyada Pre Pre Med ee ugu Fiican Florida
Shan Sababood oo Heerarka Sare ee Kalkaalinta Caafimaadka ah ayaa muhiim u ah Hadda si ka badan sidii hore
10 Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Deg Bachelor
Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka
Previous Post:5 Barnaamijyada Kalkaaliyeyaasha Degdegga ah ee Arizona
Post Next:Sida Loo Helo Waxbarashada Sare Marka aad Hogaamiso Nolol Mashquul ah
AssignmentHelpPro.co.ukKa hel khadka tooska ah ee ugu fiican Caawinta Meelaynta UK 50% ka dhimman!